कसरी तपाइँको सामग्री अधिक साझा योग्य बनाउने | Martech Zone
कसरी तपाइँको सामग्री अधिक साझा योग्य बनाउने
शनिबार, जुलाई २१, २०१। Douglas Karr
यस इन्फोग्राफिकको शीर्षक साँच्चै हो सही भाइरल साझेदारीको लागि गोप्य सूत्र। मलाई इन्फोग्राफिक मन पर्छ तर म नामको प्रशंसक होइन ... पहिलो, मँ विश्वास गर्दिन कि एउटा सूत्र छ। अर्को, म विश्वास गर्दिन कि त्यहाँ एक उत्तम शेयर छ। मँ विश्वास गर्दछ त्यहाँ कारकहरु र घटनाहरु को एक संयोजन हो कि महान सामग्री को साझा को लागी नेतृत्व। यो केहि सादा भाग्य हो किनकि यो सही मान्छेहरूको अगाडि बढ्दछ जो यसको पहुँच विस्तार गर्न सक्दछ। अन्य कारकहरू यस इन्फोग्राफिकबाट राम्रोसँग साझेदारी गरिएका छन् ग्रिफिन, एक अनलाइन मार्केटिंग फर्म।
महान, साझेदारी योग्य सामग्री सिर्जना गर्न साँचो कुञ्जी तत्वहरूको सही सन्तुलन हुनु हो। तपाईंले सहि भावनाहरू अपील गर्न आवश्यक छ, सही ढाँचा र लम्बाइ छनौट गर्नुहोस्, र सही दृश्यहरू राख्नुहोस्। के तपाईंलाई थाहा छ, यद्यपि छोटो फारम सामग्री सामग्री विपणकहरू बीच अधिक लोकप्रिय छ, ,3,000००० र १०,००० शब्दहरू बीचका लेखहरूले सबैभन्दा बढी सेयर पाउँछन्?
इन्फोग्राफिक भावनाहरू, अनुभूति, अनुसन्धान, पठनीयता, दृश्यहरू, एक उत्कृष्ट शीर्षक, अधिकार, प्रभाव, समय र लोकप्रिय सामग्रीलाई पुन: जीवित पार्ने माध्यमबाट हिँड्छ (एक रणनीति जुन हामी सबै समय प्रयोग गर्छौं) Martech Zone)। हामीले भर्खरको इन्फोग्राफिकमा हामीले साझेदारी गरेको जाँच गर्न पनि निश्चित गर्नुहोस् Content रणनीतिहरू तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्न.
टैग: एक उत्कृष्ट शीर्षकअख्तियारसंज्ञाभावनाgoinswriterग्रिफिनहबस्पटप्रभावmozOkdorkquicksproutपठनीयताअनुसन्धानसाझेदारी योग्य सामग्रीसाझेदारी गरियोसाझा सामग्रीसाझेदारी सामग्रीसामाजिक सेयरहरूसमयtollfreeforwardingभाइरलभाइरल मार्केटिंगदृश्यहरु
ईमेल इनसाइट्स: तपाईंको ईमेल प्रतिस्पर्धा कसरी अनुसन्धान गर्ने
कसरी मार्केटरहरू संवर्धित वास्तविकता प्रयोग गर्नेछ?
साब्रिना किज्जी (@ साब्रिनाओन्मोभ)
अगस्ट 13, 2015 मा 11: 55 AM
धेरै उपयोगी सुझावहरूको साथ महान इन्फोग्राफिक्स। भिजुअल हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो भनेको मानिसहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने साथसाथै सही समयमा पोष्टिंग पनि गर्दछ। धेरै उपयोगी हुने छैन यदि तपाईंसँग उत्तम दृश्यहरू छन् तर त्यस समयमा पोस्ट गर्नुहोस् जहाँ त्यहाँ धेरै गतिविधिहरू छैनन्। राम्रो पोष्ट!